Ianao izao dia manana Perfect Border sy Rotate Canvas azo alaina ao amin'ny Photoshop iPad | Famoronana an-tserasera
Vaovao mahafinaritra amin'izao andro fahavaratra mafana izao ho an'ny tompona Photoshop amin'ny iPad, Rotate Canvas ary Refine Edge eto. Ambonin'izany rehetra izany, mametraka ny Edge Perfect amin'ny sandany sahaza azy isika satria hamela "rendrarendra" vitsivitsy avy amin'ny iPad rehefa miatrika an'ity fampiharana Adobe mahafinaritra ity isika.
Lazainay izany satria ho tanteraka avelao hisafidy ireo singa sarotra indrindra amin'ny sary Ahoana ny volon'ireo sary ananantsika ireo? Fanavaozana izay hofaritanay mba hahafahanao manavao ny fampiharana amin'ny iPad-nao.
Izy io dia ny Perfect Edge Brush izay efa ananantsika ao amin'ny Photoshop amin'ny iPad. Fitaovana iray lehibe izay manolotra fametrahana mazava tsara rehefa mifantina singa sasany amin'ny sary. Izay volo izay mandany fotoana be dia be amin'ny fanaovana safidy marina na izany hoditra izany, izy ireo dia ho asa mora kokoa avy amin'ny iPad.
Ity fanavaozana ity dia tonga taorian'ny nahazoanao hevitra avy amin'ireo matihanina sy mpampiasa mampiasa ity takelaka Apple ity. Araka ny lazain'i Adobe, Ny fahaizana 'manakaiky ny pixel' dia tena ilaina mba hahatratrarana valiny tena izy. Izahay dia miresaka momba ny fomba ahafahantsika manala volo miraviravy na manaisotra ireo singa avy any aoriana miaraka amin'ny tena marina toy ny ataontsika ao amin'ny kinova desktop. Mampiseho tsara an'io fampiasa vaovao io ireo sary.
La endrika vaovao faharoa amin'ity fanavaozana ity Photoshop amin'ny iPad, aza adino ny hafa fiasa vaovao roa tonga tamin'ny Mey ary efa anananao izany, dia ny asan'ny Rotate Canvas raha manao fanovana izahay. Izay manome andraikitra lehibe azy rehefa miasa miaraka amina interface interface izay eo am-pelatanan'ny rantsantanana sahala amin'ny hoe miaraka amina ravina sy pensilihazo isika.
Una fanavaozana lehibe ho an'ny Photoshop amin'ny iPad ary mamporisika anao izahay hanavao izao mba hahafahanareo hiara-hiasa amin'izy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Ahodina ny lamba sy ny tonga lafatra tonga amin'ny Photoshop amin'ny iPad
The David, iray amin'ireo sary sokitra mahavariana indrindra amin'ny tantaran'ny zavakanto